Guutuu Addunyaa keessatti lakkoofsi namoota Vayirasii koroonaatiin qabamuun mirkanaahee miiliyoona 3 fi kuma dhibba tokkoofi kuma torbaatama dabre - NuuralHudaa
Guutuu Addunyaa keessatti lakkoofsi namoota Vayirasii koroonaatiin qabamuun mirkanaahee miiliyoona 3 fi kuma dhibba tokkoofi kuma torbaatama dabre
Guutuu Addunyaa keessatti lakkoofsi namoota Vayirasii koroonaatiin qabamuun mirkanaahee miiliyoona 3 fi kuma dhibba tokkoofi kuma torbaatama dabre. Lakkoofsi namoota sababa vayirasii kanaa du’anii ammoo kuma dhibba lamaa fi kuma diigdama kan dabre yoo tahu, namoonni kuma dhibba sagalifi kuma saddeetamaa ol ammoo dhibee kana irraa bayyanatanii jiru.
U.S.A. keessatti hanga guyyaa har’aatti namoota miliiyoona tokkoo ol (1,040,233) vayirasichaan qabamuu mirkanaahe jidduu, 60,000 du’uu gabaafame. Awrooppaa keessattis lakkoofsi namoota Vayirasichaan qabamaa jiranii ammas guddaadha. Haata’u malee biyyoota akka Ispeen, Xaaliyaan fi Jarman kanneen kanaan dura akka malee miidhaman keessatti lakkoofsi namoota haarayatti vayirasichaan qabamanii hanga tokko hirdhataa jira. Faransaay fi Briteen keessatti haalli tamsa’ina Vayirasichaa ammas adda hin baane.
Gama biraatiin ammoo achuma Awrooppaa biyyoota akka Raashiyaa, Beljiyeem fi Neezarlaand keessatti tamsa’ini vayirasichaa daran dabalaa jira. Raashiyaa keessatti lakkoofsi namootaVayirasichaan qabamanii 100,000 tti dhihaatee jira.
Biyyoota Ameerikaa Kibbaa/Latin America keessa ammoo weerarri vayirasichaa Braaziil keessatti hammaataa jira.
Dhibee Vayirasii koroonaatiin walqabatee odeeyfannoo April 29, 2020 jidduu kanneen ijoo tahan akka armaan gadiiti.
16:05GMT-Qondaaltonni mana maree Kibba Yaman magaalaa Adan keessatti namoonni shan vayirasii koroonaatiin qabamuu ibsuun, uggura sochii ummataa guyyaa sadihiif turu labsan.
15:58GMT-Ministeerri Fayyaa Turkiyaa weerarri Vayirasii koroonaa biyyattii keessatti sadarkaa hamaa bira dabraa jiraatuu beeksise. Turkiyaan akka jettutti sa’a 24 dabre keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba kana irraa bayyanatanii, kan namoota haaraya qabamuun mirkanaahee dachaa lamaan caala. Biyyattii keessatti hanga guyyaa har’aatti namoota 114,000 vayirasichaan qabamuun mirkanaahe jidduu, 3000 ol du’uu gabaafame.
15:007GMT-Ameerikaan ammas haalli wiirtuuleen Chaayinaa qorannoo Vayirasii keessatti geggeessan yaaddeessaa tahuu beeksiste. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa akka jedhetti, wiirtuuleen Qorannoo Chaayinaa of eggannoon godhan hangama akka tahe ammas kan hin beekkamne tahuu ibsuun, biyyatti akkuma kanaan duraa addunyaa balaaf saaxiluu malti jechuun yakke.
14:35GMT-Indiyaan garee muslimootaa Tabligi Jama’aa jedhamu ammas kophatti dararaa jiraatuu gabaafame. Mootummaan biyyattii kanaan dura Jama’aan kun akeekkachiisa mootummaa dabruun gocha vayirasii koroonaa facaasuu dalagaa jira jechuun eega yakkee booda, biyyattii keessatti haleellaa fi dararaan muslimoota irratti raawwatamu hammaachuun gabaafame. Haata’u malee miseensonni garee kanaa sirna da’waa tokko irratti hirmaatanii fi kuma heddutti lakkaahaman, addatti hordoffii godhameen vayirasicha irraa bilisa tahanis hanga ammaatti gadi hin lakkifamne.
12:40GMT- WeeraraVayirasii koroonaatiin wal qabatee diinagdeen Ameerikaa ji’oota sadan dabran keessa 4.8% hir’atuu gabaafame.
11:20GMT-Daa’imni baqattoota Suuriyaa haaraya dhalatte takka Vayirasii koroonaatiin eega qabamtee booda deebitee fayyuu gabaafame. Daa’imni kun dhalatee guyyaa shan booda Vayirasichaan kan qabame yoo tahu, Turkiyaa magaalaa Izmiir keessatti waldhaansa godhameefiin ji’a tokko booda fayyee Hospitaalaa bahe.
09:15GMT-Indiyaa keessatti lakkoofsi namoota sababa Vayirasii koroonaatiin du’anii dabalaa jiraatuu gabaafame. Sa’aa 24 dabre keessatti qofa yoo xiqqaate namoonni 73 saba koroonaa du’uu ibsame.
07:30GMT-Turkiyaan deeggarsa meeshaalee fayyaa to’annoo COVID-19 oolu Ameerikaa ergite. Turkiyaan eega weerarri Vayirasii koroonaa addunyaa irratti ka’ee asitti, Chaayinaa fi Ityoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa hedduuf deeggarsa dawaa fi meeshaalee fayyaa gara garaa kennaa turte.
Abdulaziz Roobaa says:
September 27, 2021 sa;aa 11:02 pm Update tahe